Mogadishu Journal » Wasiir Biixi’’ Dowladda Soomaaliya waxaan ka wada hadlli doonaa sidii aan u kala tagi laheyn
Mjournal : — Wasiirrka arrimaha dibada maamulka Soomaaliland oo Max’ed Biixi Yoonis ayaa isaga oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain, waxaa uu warbaahinta u sheegay wada hadallada soo socda dowladda Soomaaliya ka wada hadlli doonaan sidii ay u kala tagi lahaayeen.
Wasiirrka ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid ay ku doonayaan inay ku noqdaan dowlad ka madbaxnnaan Somalia inteeda kale, sheegay in xilligan ay Soomaaliya ka jirto dowlad rasmi ah.
‘’Wada hadallada mudo ayeey soo socdeen wixii xiligan ka horeeyay Soomaaliya ma aysan laheyn dowlad rasmi ah, laakiin hadda waxaa is leeyahay wada hadallada soo socda waxaan ka wada hadlli doonaan walaalaha Soomaaliyeed sidii aan u kala bixin laheyn,’’ ayuu yiri wasiirrka arrimaha dibada Soomaaliland.
Mar wax laga weydiiyay sababta wali ay ugu adkeysanayaan gooni isku taiga, madama in ka badan 20 sano meelna u la’yihiin qadiyada ku aadan gooni isku taiga, ayuu sheegay in wadamada dariska ah mar walba og-yihiin qadiyada Soomaaliland, waxaana uu intaa ku darray in wixii hadda ka horeeyay ay mar walba xeerinayeen kalsooni iyo waliba sidii isfaham loo abuuri lahaa.
“Hadda Soomaaliya waxaa ka jirta dowlad rasmi ah, horay ugama aysan jirin waxaana filaynaa in xilligan ay tahay markii ay kawada hadli lahaayeen sidii ay u kala tegi lahaayeen,” ayuu hadalkiisa ku daray wasiirka.
Labadii wareeg ee ugu danbeeyay wada hadallada maamulka Soomaaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaa ay ka dhaceen dalka Turkiga, waxaana la filayaa in wajiga sadexaad uu ka furmo isla dalka Turkiga.